Sida Loogu Isticmaalo Magacyada Tartamayaasha Google Ads | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Sida Loo Isticmaalo Magacyada Tartamayaasha ee Google Ads
Sida Loo Isticmaalo Magacyada Tartamayaasha ee Google Ads
Mawduuca aadka looga doodayo ee suuq-geynta lacag-bixinta ah ayaa ku dalbashada magacyada tartamayaasha iyo weedhaha. Tixgelintu waxay ka baxsan tahay sharciyada. Haddii la sameeyo, iyo sida, waa waxa aan kaga hadli doono qoraalkan.
Caqabadyada sharcigu waxay ku wareegsan yihiin calaamadaha ganacsiga. Shirkad la siiyay calaamada magaceeda iyo weedhaha la xidhiidha waxay leedahay ilaalin sharci.
Xayeysiiska Google-ka, waxa jira laba dhinac oo loo isticmaalo magaca tartame. Marka hore waa ereyga muhiimka ah. Google wuxuu leeyahay, "Ma baarno ama ma xaddidno calaamadaha ganacsiga sida ereyada muhiimka ah." Markaa ma jiraan wax ka hor istaagaya xayaysiiyaha inuu ku soo bandhigo magaca tartame ama ereyada calaamadsan ee ereyada furaha ah.
Labaad waa koobiga xayeysiiska. Google si la mid ah wuu cad yahay, oo mamnuucaya "Xayeysiisyada tixraacaya astaanta ganacsiga ee ujeedooyinka tartanka."
Caadiyan, Google Ads ayaa si toos ah u xannibi doona erey calaamadsan oo ku jira koobiga xayeysiiska. Haddii aad maamusho inaad ka gudubto algorithm-ka, shirkadda tartanka haysa ee haysata astaanta ganacsiga waxay u badan tahay inay xarayso cabasho oo ay meesha ka saarto xayeysiisyadaada.
Sidaa darteed, waxaad isticmaali kartaa magaca tartame ama calaamada ganacsiga sida erey furaha ah, laakiin ma aha nuqul xayeysiis ah.
Siyaasadaha calaamada ganacsigu waa cad yihiin. Arrimaha anshaxa maaha.
Inta aad ka dalban karto magaca tartame, xasuusnoow in tartame uu sidoo kale kuu dalbi karo. Waxaan arkay laba xaaladood oo caadi ah:
Hal ama ka badan oo tartame ah ayaa ku tartamaya magacaaga.
Ma jiro qof ku dalacaya magacyada tartamayaasha ee meeshaada ama juqraafiga.
Xayeysiyayasha intooda badani way ka jawaabaan haddii tartame uu ku dalbanayo magacooda ama odhaahdooda. Isha isha, si loo hadlo.
Dhacdada labaad waa mid aad u yar. Waxay keenaysaa su'aal ka sii adag. Haddii aad tahay qofka ugu horreeya ee ku soo bandhiga magacyada tartamayaasha, waxaad u badan tahay inaad ku martiqaadi doonto tartamayaashaas inay kuu soo bandhigaan kaaga. Ma taas rabtaa? Mise waxaad door bidaysaa nabad ku wada-noolaanshaha? Intee in le'eg ayay yihiin kuwa kula tartamaya? Si taxaddar leh ugu miisaami su'aalahan oo ka dhan ah danaha ganacsigaaga.
Sida Loo Shaqeeyo
Haddii aad go'aansatey inaad ku tartanto magaca tartame, halkan waa sida loo yeesho saameynta ugu weyn.
Ku darista ereyada muhiimka ah iyo dejinta dalabku waa aasaas. (Tilmaanta, ka raadi xarunta caawinta Xayeysiiska Google).
Si kastaba ha ahaatee, u tartamida magaca tartame ee summadaysan waa qaali. Tartamuhu waxay u badan tahay inuu ku dallacayo magaciisa, sidoo kale, waana inuu lahaadaa qiime gujis xoog leh. Xayeysiiska Google-ka ayaa u dhigi doona CTR-da la filayo ee tartame mid sare. Markaa, ereygaaga furaha ahi wuxuu yeelan doonaa qiimayn hoose oo ku saabsan qaybta CTR ee la filayo ee Dhibcaha Tayada.
Talaabada muhiimka ah waa qorista nuqul xayaysiis heersare ah.
Mar haddii xayeysiiyayaashu aysan isticmaali karin ereyga calaamadeysan ee nuqulka, qaybta ku habboon ereyga muhiimka ah ee Dhibcaha Tayada ayaa sidoo kale noqon doona mid hooseeya. Taasi waa saddex-meelood laba meelood ee Dhibcaha Tayada oo leh qiimayn liidata. Natiijadu waa qiimo aad uga sarreeya gujistaba marka loo eego mulkiilaha sumadda.
Laakin wali waxaad haysan kartaa nuqul xayaysiis oo waxtar leh. Aynu isticmaalno raadinta "Caymiska Geico." Sawirka hoose, xayaysiiska booska lambarka labaad, ee ka yimid Caymiska-online.com, wuxuu isku dayaa inuu ku xidho Idaho, gobolkayga. Haddii kale, waa kala duwanaansho guud.
Xayeysiiska ka yimid Caymiska-online.com waxay isku daydaa inay ku xidho Idaho, gobolka qoraaga.
Xayeysiiska ku yaal xagga hoose ee natiijooyinka raadinta aad ugama wanaagsana. Xayeysiisyadan hoose ma beegsadaan gobolkayga, taas oo ah fursad la lumiyey. Garoonkoodu waa qiimo jaban.
Xayeysiisyada hoose ee natiijooyinka raadinta waxay diiradda saaraan qiime jaban.
Tusaalaha kore, raadiyaha ayaa raadinaya Geico, shirkadda caymiska. Ma garanayno nooca caymiska, sida baabuurta, mulkiilayaasha guryaha, ama kiraystayaasha. Laakiin waxaan ognahay in raadiyaha uu yaqaan Geico oo uu rabo Google inuu sheego bogga shabakadda ee ku habboon. La tartame ahaan Geico ahaan, waxaan taas u rogi karnaa faa'iidadayada.
Bal qiyaas in lambarka laba uu ku sheegay, "Caymis wanaagsan hel" ciwaanka 1. Raadiyahayagu wuxuu rabaa Geico. Laakin "Heel Caymis Wanaagsan" waxay keeni kartaa inuu dib u eego - siyaasad wanaagsan ama heerar hoose.
Ma aadan sheegin Geico magaca. Ma ahayn inaad. Erayga muhiimka ah ee "Geico" wuxuu kuu sheegayaa raadiyaha inuu raadinayo shirkaddaas. Nuqulkaaga xayaysiisku wuxuu sheegayaa inay jiraan wax ka wanaagsan. Taasi waxay soo bandhigaysaa shaki iyo FOMO - cabsida maqnaanshaha.
Ku lammaan "Heel Caymis Wanaagsan" oo leh faa'iido soo jiidasho leh gudaha Ciwaanka 2 si aad riixdo uga fogaato Geico. Kadibna, boggaaga degitaanka ayaa kaa caawin doona inuu ku guuleysto baadhaha adiga oo isticmaalaya ereyada isbarbardhigga sida "ka wanaagsan" ama "ka weyn" ama "ka sarreeya."
Marka la soo koobo, ku dallacida magacyada tartamayaasha waxay caadi ahaan qaadataa qiime jaban iyo koobiyo xayeysiis ah. Si sax ah u samee, oo waxaad mari doontaa beddelka ilbiriqsi u dambeeya.
Sidee COVID-19 u bedeli karaa SERP weligeed
Sida loo wadaago shaashadda Mac la'aanteed iMessage